CINDERELLA - Ny tantaran'ny TAM sy CAM - Fizarana 1 - Ny Tany Masina any Vietnam
Ela, efa ela izay dia nisy lehilahy namoy ny vadiny ary niara-nipetraka tamin'ny zanany vavy antsoina hoe TAM. Avy eo dia nanambady vehivavy ratsy fanahy indray izy. Ilay zazavavy kely dia nahita izany tamin'ny andro voalohany taorian'ny fampakaram-bady. Nisy fanasana lehibe tao an-trano fa TAM dia nikatona tao amin'ny efitrano iray irery fa tsy navela handray ny vahiny sy hanatrika ny andro firavoravoana.
Ambonin'izany, tsy maintsy mandeha matory izy tsy misy hisakafo.
«Mandehana ary mihinàna any an-dakozia, ary tazomy ny tenanao, zaza tsy mety”, Hoy ny ratsy fanahy tamin'ny TAM.
Ary nomeny tany an-dakozia ilay trano jirofo kely, ary tany no nipetraka i TAM. Alina alina iray dia nomena tsipika tom sy lambam-basy somary matevina izy ary fonon-damba. Tsy maintsy nanosotra ny gorodona izy, nanapaka ny kitay, namelona ny biby, nanao ny fandrahoan-tsakafo rehetra, nanasa sy zavatra maro hafa. Ny tanany kely malefaka tsy nahy dia nanana felaka lehibe, saingy nitondra ny fanaintainana tsy nisy fitarainana. Nandefa azy tany anaty ala lalina ny renin-drainy, mba hanangona kitay tamin'ny ala miafina izay mety ho entin'ny bibidia. Nangataka rano i TAM haka rano avy amin'ny lavaka faran'izay mampidi-doza, hany ka lasa rendremana izy indray andro. Niara-miasa sy niasa nandritra ny andro ny TAM kely mahantra mandra-pahazoan'ny masony ny volony ary voasarona ny volony. Fa indraindray, nandeha nankany amin'ny lavaka fantsakana izy hantsaka rano, nijerijery ny tenany tao anatiny, ary natahotra ny hahatsapa fa maizina sy ratsy izany. Avy eo dia naka rano teo am-pelatanany izy, nanasa ny tavany ary namafy ny volo malefaka lava tamin'ny rantsan-tanany, ary niseho indray ilay hoditra fotsy malefaka, ary tena tsara tarehy tokoa izy.
Rehefa nahatsapa ny fomba tsara tarehy iainan'ny TAM ny reny, dia tsy nankahala azy mihoatra noho ny taloha izy, ary naniry ny hanisy ratsy azy bebe kokoa.
Indray andro, nangataka an'i TAM sy ny zanany vavy CAM izy handeha hitady eny amin'ny dobo tanàna.
« Miezaha hahazo araka izay tratra ", hoy izy. « Raha miverina amin'ny vitsivitsy monja amin'izy ireo ianao dia ho voadaroka ary halefa tsy hisakafo. "
Fantatr'i TAM fa natao ho azy ireo teny ireo satria tsy handresy ny CAM ilay renim-pianakaviana, izay paoma-masony akory, raha nanenjika an'i TAM hatrany izy araka izay vitany.
Nanandrana manjono henjana i TAM ary rehefa hariva ny andro, dia nahazo sobika feno hazandrano. Nandritra izany fotoana izany, ny CAM dia nandany ny fotoanany nivezivezy tany anaty ahitra matevina, namakivaky ny hazavan'ny ady, nanangona voninkazo, dihy ary nihira.
Ny masoandro mody alohan'ny CAM na vao nanomboka ny jono izy. Nijery ny harona tsy misy hatrizay izy ary nanana hevitra marevaka:
« Anabavy, rahavavy », Hoy izy tamin'ny TAM,« Fototra tanteraka ny volonao. Maninona ianao no tsy miditra ao anaty rano madio ary manasa goc hanesorana izany? Raha tsy izany ny reny dia hamily anao. »
Nihaino ny torohevitra i TAM, ary nisasa tsara. Tao anatin'izany fotoana izany, CAM dia nandatsaka ny hazandran'ireo rahavaviny tao anaty fitoerany ary nody haingana araka izay azony natao.
Rehefa fantatr'i TAM fa nangalarina ny trondro dia niroborobo ny fony ary nanomboka nitomany mafy izy. Azo antoka fa hanasazy azy amin'ny alina be ny renikeliny!
Tampoka teo, nifofofofo ny rivotra mahery sy marimodrano, madio ny lanitra ary madio ny rahona ary teo anoloany dia mitsiky mivolomoka manga Andriamanitry ny famindrampo, mitondra sampana maitso mavo bevelona miaraka aminy.
« Fa inona, anaka? », Hoy ny andriamani-bavy amin'ny feo mamy.
TAM dia nanome azy ny fitantarany ny fahoriany ary nanampy izy « Indrindra Andriambavy Lady, inona no hataoko anio alina rehefa mody aho? Natahotra ny ho faty aho, satria tsy hino ahy ny reniko, ary hikapoka ahy mafy. "
The Andriamanitry ny famindrampo nampionona azy.
« Ho tapitra tsy ho ela ny loza hanjo anao. Matokia ahy ary mifalia. Ankehitriny, jereo ny haronao mba hahitana raha misy zavatra tavela ao? »
Nijery i TAM ary nahita trondro kely mahafatifaty misy vombony mena sy maso volamena, ary feo kely tsy nampoizina akory.
The andriamani-bavy dia nasainy naka ny trondro tao an-trano izy, nataony tao anaty fantsakana tao ambadiky ny trano izy, ary namelona azy intelo isan`andro isan 'izay azony avotana amin' ny sakafony.
Nisaotra ny TAM i andriamani-bavy indrindra tamim-pankasitrahana ary nanao araka izay nolazaina azy. Isaky ny mandeha any amin'ny fantsakana izy dia hiseho eo ambonin'ny rano ny trondro mba hiarahaba azy. Saingy raha misy olona hafa ho avy, ny trondro dia tsy hiseho mihitsy.
Ny fihetsika hafahafa nataon'i TAM dia tsikaritry ny reniny izay nitsikilo azy, ary nandeha nankany amin'ny lavadrano hitady ny trondro izay niafina tao anaty rano lalina.
Nanapa-kevitra ny hangataka an'i TAM izy fa handeha amin'ny lohataona lavitra haka rano, ary manararaotra ny tsy fisian'izany, dia napetrany ny akanjo farany rovitra, dia nandeha niantso ny trondro izy, namono azy ary nahandro izany.
Rehefa niverina i TAM dia nankany amin'ny lavaka fantsakana, niantso ary niantso, fa tsy nisy hazandrano hafa hita afa-tsy ny fanambanin'ny rano feno ra. Niondrika tamin'ny lohany tamin'ny rano izy ary nitomany tamin'ny fomba tena mahory.
The Andriamanitry ny famindrampo niseho indray, endrika tsara toy ny reny be fitiavana, ary nampionona azy:
« Aza mitomany, anaka. Novonoin'ny rainao ny hazandrano, fa tsy maintsy manandrana mitady ny taolany ianao ary handevina azy ao anaty tany eo ambanin'ny tsaram-batanao. Izay rehetra tadiavinao azy dia mivavaha amin'izy ireo ary homena ny fanirianao. »
Nanaraka ny torohevitra i TAM ary nitady ny taolan'ny trondro na aiza na aiza nefa tsy nahita.
« Cluck! cluck! »Hoy hen,« Omeo tady kely aho dia hasehoko anao ny taolana. »
TAM dia nanome paosy vitsivitsy azy ary hoy ny henoho:
« Cluck! cluck! araho aho ary horaisiko ho amin'izany toerana izany ianao. "
Nony tonga tao amin'ny valan-jiro izy ireo dia nanakom-bavony ravinkazo ny akoho, tsy nanala ny taolam-trondro izay novonoin'i TAM tamim-pifaliana ary nalevina araka izany. Tsy ela akory dia nahazo volamena sy firavaka ary akanjo fitafy mahafinaritra be dia be izy ireo fa hahafaly ny fon'ny tovovavy rehetra.
Rehefa Fararano fararano tonga, TAM dia nasaina nijanona tao an-trano ary nanangona ireo harona roa lehibe sy ny be maitso izay nafangaro ny reniny ratsy fanahy.
« Miezaha hanana ny asa vita », Hoy izy,« Alohan'ny handehanano hanatrika ny Fety. "
Avy eo dia niakanjo ny akanjo tsara tarehy indrindra ny renim-pianakaviana sy ny CAM ary lasa nitokana irery.
Rehefa avy nandeha lavitra izy ireo dia nanandratra ny ranomasony i TAM ary nivavaka:
« Ry Andriamanitry ny Famindrampona ô, mba ampio aho. »
Miaraka amin'izay ilay maso malefaka andriamani-bavy niseho, ary niaraka tamin'ny sampany maintso maitso mazoto, dia nanidina tsintsina kely ho an'ny tsintsina izay nanamboatra tsaramaso ho an'ny zazavavy. Fotoana fohy dia vita ny asa. TAMIN-dranomaso ny ranomasony, niakanjo akanjo manga sy volafotsy mamirapiratra. Tsara tarehy izy ankehitriny Princess, ary nankany amin'ny festival.
CAM dia tena gaga nahita azy, ary nibitsibitsika tamin'ny reniny hoe:
« Moa ve ilay tovovavy manankarena tsy hafahafa toa an'i Tamavaviko? »
Rehefa nahatsapa i TAM fa ny reniny sy ny CAM dia nibanjina azy fatratra, dia nandositra izy, saingy maimaika kosa dia nariany ny kapetaka tsara iray izay nalain'ny miaramila ary nentiny tany amin'ny Malagasy.
The Malagasy nandinika azy io tamim-pitandremana ary nanambara fa tsy mbola nahita asa toy izany hatramin'izay izy. Izy no nanao ny vehivavy ny Palace andramo ihany, fa ny slipper dia kely loatra na dia ireo manana tongotra kely aza. Avy eo dia nandidy ny vehivavy manan-kaja rehetra amin'ny fanjakana izy mba hanandrana izany saingy tsy tokony hisy na dia iray aza amin'izy ireo. Tamin’ny farany, dia nisy teny nirahina hoe ho lasa ilay vehivavy izay afaka manao ny lambam-baravarana Queen, izany hoe, ny Vadin'ny mpanjaka voalohany.
Farany dia nanandrana i TAM ary ny fonja dia nameno azy tsara. Avy eo izy dia nanao palitao roa ary niseho tamin'ny akanjo manga sy volafotsy mamirapiratra, tena tsara tarehy. Nentina tany izy fitsarana miaraka amina lakana lehibe, lasa Queen ary nanana fiainana tsy dia mahatoky sy sambatra.
1 : RW PARKES 'Foreword dia manolotra an'i LE THAI BACH LAN sy ireo boky fohy tantarany: “Ramatoa. Bach Lan dia nanangona fantina mahaliana Angano Vietnamese izay faly aho manoratra mialoha mialoha. Ireo talenta ireo, izay voadika tsara sy tsotra nadika ny mpanoratra dia manana fijery mahafinaritra, izay tsy avy amin'ny ampahany kely amin'ny fahatsapana fa mampita ny toetran'ny olombelona mahazatra mitafy akanjo fitafy. Eto, amin'ny faritra tropikaly, manana mpankafy mahatoky isika, vady saro-piaro, renim-pianakaviana tsy malala, izay zavatra namboarina tamin'ny tantaran'ny vahoaka Tandrefana. Ny tantara iray dia Cinderella averimberina foana. Matoky aho fa hahita ity mpamaky ity ity boky kely ity ary hamporisika ny olona ho liana amin'ny firenena iray izay ny olana misy ankehitriny dia fantatra tsara kokoa noho ny kolontsainy taloha. Saigon, 26 febroary 1958. "
2 :… Manavao…
◊ Votoatiny sy sary - Loharano: Angano Vietnamianina - Ramatoa LT. BACH LAN. Kim Lai An Quan Publisher, Saigon 1958.
Images Sary natokana ho azy no napetrak'i Ban Tu Thu - www.hitoriam.com.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice: DO QUYEN - Câu chuyen ve TINH BAN.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice: Câu chuyen ve TAM CAM - Phan 1.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice: Câu chuyen ve TAM CAM - Phan 2.
(Visited 2,869 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Fikambanan'olona Dokotera 54 ao Vietnam
CINDERELLA - Ny tantaran'ny TAM sy CAM - Fizarana 2 →
FIAINANA fohy momba ny SORATORANA FARANY VIETNAMESE - Fizarana 2 (4,922)
Fitsidihana anio: 341
Andro farany 7 nitsidika: 2,647
Total visits: 433,827